> Resource> iPod> Olee otú iji Hichapụ Photo Library si iPod
M ihe niile foto ndị a na m iPod na Photo Library album. Achọghị m ka m ha na m iPod ma anaghị m maara otú ihichapụ ha. Nwere ike onye biko nyere?
Na Ọtụtụ foto gị iPod Photo Library, eleghị anya ị gaghị na-eche ka ihichapụ ha niile onwe elu gị iPod ohere. Ma, ọ na-ewute gị na ị nwere ike na-ihichapụ foto gị iPod Igwefoto Roll otu otu. Ya mere, ka ihichapụ Photo Library si iPod, ga-amasị m ike ikwu na ị na-eji a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ - Wondershare TunesGo (Windows) ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac). Ma nsụgharị nke a usoro ike ka ị na ihichapụ iPod Photo Library na ogbe. Tupu nhichapụ, ị nwere ike nyefee gị iPod Photo Library na kọmputa gị maka nkwado ndabere na mpaghara òkè.
Esi wepụ Photo Library si iPod
Na akụkụ n'okpuru, m ga-eso gị nzọụkwụ-site-nzọụkwụ nkuzi banyere wepụ Photo Library na gị iPod na Windows version. Dị ka a Mac onye ọrụ, i nwere ike iji yiri nzọụkwụ wepụ foto na gị Photo Library. Pịa "Download" button ibudata a usoro na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 1. Mee gị iPod na-agba ọsọ a usoro
Nke mbụ niile, wụnye a usoro na kọmputa gị na-agba ya. Ọ bụrụ na ị wụnye iTunes, programmụ a ga-enye gị iTunes echichi window. Wee wụnye iTunes. Jikọọ gị iPod gị na kọmputa site na eriri USB. Mgbe ịchọputa gị iPod, a usoro ga-egosipụta niile Ama na gị iPod na ekpe kọlụm.
Nzọụkwụ 2. Nhichapụ Photo Library si iPod
Mgbe ahụ, pịa "Photos" taabụ na ekpe kọlụm iji bugote foto management window. Dị ka m kwuru n'elu, a usoro-ahapụ gị idetuo Photo Library na gị iPod na kọmputa tupu wepụ ya. Ego Photo Library na pịa "Export ka". Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike kpamkpam hichapụ gị iPod Photo Library.
Pịa Photo Library imeghe ya. Họrọ photos ị na-achọghị na-ọ bụla ọzọ. Mgbe ahụ, pịa "Hichapụ". Cheta na-gị iPod ejikọrọ na kọmputa gị oge niile.
Cheta na: Wondershare TunesGo bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na iPod aka 5, iPod aka 4 na iPod aka 3, Wondershare TunesGo (Mac) na-akwado iPod aka 5 na iPod aka 4. ha abụọ na-dakọtara na iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 8 na iOS 9.
Ị mere nke ọma! I jisiri wepụ gị iPod Photo Library. Ọ bụrụ na ị na-achọ ihichapụ foto na igwefoto Roll ma ọ bụ ndị ọzọ albums, ị nwere ike mezue ya ngwa ngwa. Nzọụkwụ ndị fọrọ nke nta otu ihe ahụ.
N'ezie, Wondershare TunesGo bụ ike omume. Na ya aka, ị nwere ike nyefee music na listi ọkpụkpọ site na iPod ka iTunes na kọmputa, idetuo foto site na kọmputa na-iPod, na-akpali ọ bụla data n'etiti iPhone, iPad na iPod. Ugbu a, download a usoro na-agbalị ya na gị onwe gị!
Hichapụ Videos si iPod na Easy